Hosia 14 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Otetela Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Uzbek Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
14 “Izrel, lọghachikwute Jehova bụ́ Chineke gị,+ n’ihi na njehie emewo ka ị sụọ ngọngọ.+ 2 Jirinụ okwu na-egosi nchegharị lọghachikwute Jehova.+ Unu niile, sịnụ ya, ‘Gbaghara njehie anyị;+ nara ihe dị mma, anyị ga-enyekwa gị ụmụ ehi bụ́ mkpụrụ egbugbere ọnụ anyị.+ 3 Asiria agaghị azọpụta anyị.+ Anyị agaghị agba ịnyịnya.+ Anyị agaghị asị aka ọrụ anyị ọzọ, “Ị bụ Chineke anyị!” n’ihi na ọ bụ gị na-eme ka e meere nwa na-enweghị nna ebere.’+ 4 “M ga-agwọ ekwesịghị ntụkwasị obi ha.+ M ga-eji obi m hụ ha n’anya,+ n’ihi na iwe m na-eweso ya adajụwo.+ 5 M ga-adị ka igirigi nye Izrel.+ Ọ ga-awa okooko dị ka lili, gbaakwa mgbọrọgwụ dị ka osisi Lebanọn. 6 Ọ ga-awa alaka, ọ ga-adị ebube ka osisi oliv,+ ọ ga na-esikwa ísì ụtọ dị ka osisi Lebanọn. 7 Ha ga-ebi ọzọ na ndò ya.+ Ha ga-akụ ọka,* ha ga-amakwa ifuru dị ka osisi vaịn.+ A ga na-echeta ya dị ka mmanya Lebanọn. 8 “Ifrem ga-asị, ‘Gịnị ka gbasara mụ na arụsị?’+ “Mụ onwe m ga-azaghachi, m ga-elegide ya anya.+ Mụ onwe m dị ka osisi junipa nke jupụtara n’akwụkwọ ndụ.+ Ọ bụ m ga-amịrị gị mkpụrụ.” 9 Ònye maara ihe, ka o wee ghọta ihe ndị a?+ Ònye nwere uche, ka o wee mara ha?+ N’ihi na ụzọ Jehova ziri ezi,+ ọ bụ ndị ezi omume ga na-eje ije na ya;+ ma ndị na-emebi iwu ga-asụ ngọngọ na ya.+